Public Health Concern स्वास्थ्य सरोकार – Public Health Concern
महिनावारी सम्बन्धि पूर्ण जानकारी (समस्या, परिवर्तन , जिज्ञासा आदि )
महिनावारी (अङ्ग्रेजी: Menstruation) महिलाको गर्भाशयको भित्री अस्तर रगत र ऊतक योनीबाट निष्कासन हुने प्रक्रिया हो / साधारणतया महिनावारी १२ देखि १५ वर्षको उमेरमा सुरू हुन्छ; कसैमा आठ वर्ष देखि नै महिनावारीको...
लकडाउनले केही त फाइदै भएको छ । खासगरी बालबच्चालाई जंकफुडको लतबाट छुटाएर आफ्नै भान्सामा पाक्ने थरीथरी खानामा अभ्यस्त बनाउन पाइएको छ । यतिबेला उनीहरूलाई चिसो पेयको पनि तलतल लाग्न सक्छ...
कोरोना भाइरसबाट जोगिन कस्तो खानपिन गर्ने ? WHO का पाँच टिप्स /
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीको कारण अहिले धेरै कुराहरू परिवर्तन भइरहेका छन् । काम गर्ने तरिका, सरसफाइदेखि खानपानको तरिका परिवर्तन भएका कुराहरूको सूचीमा समावेश छन् । मानिसको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य र...
गर्भावस्थामा ख्याल राख्नैपर्ने केही कुराहरू / कस्ता लक्षणहरु खतरा हुन्छन र के के साबधानी अपनाउने /
गर्भावस्था आफैँमा एक संवेदनशील अवस्था हो । यतिबेला गर्भवतीमा केही शारीरिक र मानसिक परिवर्तन देखिन्छ । त्यसैले यसबेला गर्भवतीले आफ्नो स्वास्थ्यमा बढी नै ख्याल राख्नुपर्छ। गर्भवती मात्र होइन, उनका श्रीमान...
बच्चालाई औषधि दिनुअघि के के सावधानी अपनाउने ?
सामान्य रुघाखोकी वा ज्वरो आउनसाथ हामी बालबच्चालाई औषधि खुवाउने हतार गर्छौं । पखला लागेमा वा अन्य कुनै सामान्य समस्या भएमा औषधि पसलमा दौडन्छौ। जबकि यस्ता सामान्य शारीरिक समस्यामा औषधि सेवन...